Fanomezam-Boninahitra Ataon’ny Mpianatra amin’ireo Lasibatry ny Fanafihana natao tamin’ny Charlie Hebdo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2015 3:24 GMT
Misy mpianatra manome voninahitra ireo lasibatry ny famonoan'olona tao amin'ny Charlie Hebdo tamin'ny filazana fa manana ny fitaovam-piadiany ihany koa ry zareo hanoherana ny fanandramana hamono olona tamin'ny 7 janoary 2015. Tsy hoe ny mpitia manao kisarisary ihany no nandray ny penin'izy ireo hanomezam-boninahitra ireo lasibatra tao amin'ny Charlie Hebdo sy hiarovana ny fahalalahana maneho hevitra, fa te-haneho ny heviny amin'ny alalan'ny kisarisary ihany koa ny mpianatra hanamelohana ny fampihorohoroana sy handefasana ny hafatry ny fitiavana, fandriampahalemana ary ny fandeferana. Niditra an-tsehatra hanoherana izay nozakain'ilay gazety mivoaka isan-kerinandro ny mpianatra seconde ao amin'ny Lisea iray ao Strasbourg. Kibo saoky ny nahiny ny nataon-dry zareo ary tsy nisy fihatsarambelatsihy fa nihetsika araka ny fanaon-dry zareo tsy noterena hisotro fa avy dia naneho ny heviny fotsiny amin'izao.
1- Eto amin'ity sary ity ireo mpianatra dia mihevitra fa tsy azo atao mihitsy ny mamaly herisetra amin'ny herisetra (izay miseho amin'ny alalan'ny kalachnikov eto), fa mamaly ny herisetra amin'ny fomba fiteny mahazatra ny olona, amin'ny alalan'ny sary tsotra izao izay asehon'ny penina.
Penina miady amin'ny fitaovam-piadiana, kisarin'ny mpianatry ny lisea ao Strasbourg
2- Eto amin'ity sary ity indray ny mpianatra mandray ny teny tarigetra “Je suis Charlie” mba hijoroana fa mitaky ny fotokevi-dehiben'ny fahalalahana maneho hevitra sy mieritreritra tsy misy tahotra ihany koa ry zareo.
7 janoary 2015 kisary Je suis Charlie nataon'ny mpianatry ny Lisea
3- Melohin'ny mpianatra eto amin'ny sary eto ambany ity kosa ny asa niteraka ra mandriaka namelezana ny gazety. Ho azy ireo dia mandray stylo sy manoratra izay noeritreretina indrindra rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny hevitry ny hafa dia ampy. Izany no fomba fiteny tokony horaisina.
Ny ranomainty no tokony handriaka fa tsy ny ra Sarin'ny mpiantry ny Lisea iray ao Strasbourg
4- Mampita ny hafatra mety manerantany ny mpianatra eto amin'ny fanasongadinana ny soatoavina mahaolona tahaka ny fahafahana sy ny fandeferana.
Manao sary hanjakan'ny fandeferana sy ny fahafahana Sarin'ny Liseana iray ao Strasbourg
5- Hafa-pitiavana izay mitaratra ny fijery mifantoka amin'ny tsara avy amin'izao tontolo izao : Ny fitein'ny matanjaka (soratra) no handresy amin'ny fitenin'ny osa indrindra (fitaovam-piadiana), Ny fitiavana hatrany no handresy ny fankahalàna, ary ny tsara no handresy mandrakariva manoloana ny ratsy.
Tsy misy lohateny nataon'ny mpianatry ny Lisea